‘स्वयंसेवामा नयाँँ पिँढी थपिदैछन्’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘स्वयंसेवामा नयाँँ पिँढी थपिदैछन्’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 9, 2018	0 138 Views
रेडक्रस दाङका सभापति
विश्व रे डक्रस दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्वका एकसय ९६ दे शमा विभिन्न कार्यक्रम गरी रे डक्रस दिवस मनाइएको छ । हामीले पनि ने पालमा विभिन्न कार्यक्रम गरे र दिवस मनाएका छांै  । हे नरी ड्युनाको जन्मोत्सवको दिनलाई हामीले रे डक्रस दिवसका रुपमा मनाउदै आएका छौ  । खासगरी मानवीय से वालाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा रे डक्रस लागिरहे को अवस् थामा उसमाथि विभिन्न खालका आरो प पनि लाग्न थाले का छन् । स् वयंसे वी संस् थाका काम, रे डक्रस दिवस र रे डक्रसमाथि लाग्ने आरो पका विषयमा विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा रे डक्रस जिल्ला शाखा दाङका सभापति नारायण आचार्यसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको विश्व रे डक्रस दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्वका एकसय ९६ दे शमा विभिन्न कार्यक्रम गरी रे डक्रस दिवस मनाइएको छ । हामीले पनि ने पालमा विभिन्न कार्यक्रम गरे र दिवस मनाएका छांै  । हे नरी ड्युनाको जन्मोत्सवको दिनलाई हामीले रे डक्रस दिवसका रुपमा मनाउ“दै आएका छौ  । खासगरी मानवीय से वालाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा रे डक्रस लागिरहे को अवस् थामा उसमाथि विभिन्न खालका आरो प पनि लाग्न थाले का छन् । स्वयंसे वी संस्थाका काम, रे डक्रस दिवस र रे डक्रसमाथि लाग्ने आरो पका विषयमा विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा रे डक्रस जिल्ला शाखा दाङका सभापति नारायण आचार्यसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
रेडक्रस दिवसबारे के भन्नुहुन्छ ?
आठ मे अर्थात हे नरी ड्युनाको जन्म दिवस हो  । १८५९ मा भएको युद्धमा भएका घाइते हरुलाई हे नरी ड्युनाले से वा गर्नुभयो  । जुन से वाको बारे मा उहाले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो  । त्यो पुस् तक युरो पका से नापति लगायत राज्यका प्रमुखहरुलाई पठाउनुभयो  । त्यो कितावले चारै तिर ठूलो हलचल पै दा भयो  । त्यो युद्धमा ४० हजार से ना घाइते तथा के हीको ज्यान गइसके को अवस्था थियो  ।
त्यो अवस्थाको चित्रण गरे र पुस्तक प्रकाशन गरे पछि त्यहाका शासकहरु प्रभावित भए । त्यसपछि हे नरी ड्युनाले आह्वान गरे को दुईवटा कुरा पहिलो एउटा स् वयंसे वी संस् था हो स् जसले मानवीय से वामा काम गरो स र अकोर् कुरा त्यो संस् था विश्वव्यापीरुपमा मान्यता प्राप्त गरो स् जसले भविष्यमा हुने जुनसुकै युद्धहरु रो क्न नसकिए पनि युद्धमा घाइते भएकाहरुको उद्धार र से वा गरोस् भन्ने कुरा उल्ले ख गर्नुभएको थियो  । जुन १८६३ मा आएर युरो पियन राष्ट्रहरुको सम्मे लनले मान्यता प्रदान ग¥यो  ।
त्यहा एउटा समिति गठन भयो जसलाई हामीले आइसिआरसी भन्छांै  । सन् १८२८ मे ८ मा जन्मिनु भएका ड्युनाको जन्मदिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रे डक्रस दिवसका रुपमा मनाउने पछिल्ला जे ने भा कन्भे न्सले मान्यता प्रदान गरिसके पछि
हामीले अहिले पनि त्यही मानवीय से वालाई आत्मसात गदैर् हे नरी ड्युनाको जन्मदिनलाई रे डक्रस दिवसका रुपमा मनाउ“दै आएका छौ ं ।
दाङमा रे डक्रसका गतिविधि के छन् त ?
झण्डै एकसय वर्षपछि मात्रै ने पाल रे डक्रस सो साइटीको स् थापना भयो  । जसले अञ्चलस् तरीय शाखा गठन भए । जहा“ तत्कालीन अञ्चलाधीस तथा अञ्चलाधीशको सक्रियतामा १४ अञ्चलमा प्रारम्भिक इकाई गठन भएका हुन् । अहिले त ७५ जिल्लामा रे डक्रस सो साइटीको स् थापना भइ क्रियाशील छन् भने पछिल्लो व्यवस् थाअनुसार निकट भविष्यमै ७७ जिल्लामा यस् ता शाखा गठन ह“ुदै छन् । यो स् वयंसे वी संगठन हो  । जसको सञ्चालनका लागि आफै आर्थिक जो हो गनेर् गरिएको छ । दाङ शाखाको स् थापना २०२९ बै शाख १६ गते स् थापना भएको हो  । अहिले पनि क्रियाशील नै छ । म शाखा सभापति हुनुपूर्वका ने तृत्वलाई बडो कठिनाइ सहनुप¥यो  । अहिले त धे रै नागरिकको समर्थन पाएका पनि छौ ं । एकसय ९६ दे शमा रे डक्रस दिवस मनाइएको छ । यसको व्यापक अर्गनाइजे शन छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फे ड्रे शन आइसीआरसी छ भने अकोर् ने शनल अर्गनाईजे शन छ भने हामी जिल्ला शाखाहरु पनि सो ही अनुसारले अस् ितत्वमा छांै  । यी सबै तहमा रे डक्रस दिवस विभिन्न
कार्यक्रम गरे र मनाइने गरिन्छ । यो एउटा मानवीय से वाका लागि स् थापना भएको संस् था हो र हामीले सो हीअनुसार काम गदैर् आइरहे का पनि छौ ं ।
रेडक्रसमार्फत कस्ता कामहरु भएका छन् ?
दाङमा हामीले आइपनेर् विभिन्न विपतको क्षे त्रमा काम गरिरहे का छौ  । एक वर्ष अघिका कुरा गनेर् हो भने मानव बे चविखन रो कथामका लागि काम गरे का थियौ ं । यस् ता गतिविधि नियमितजसो भइरहे का छन् भने हामीले दाङमा रक्त सञ्चार के न्द्र स् थापना गरे का छांै  । घो राहीमा १५÷१६ वर्ष भइसक्यो भने तुलसीपुरमा भर्खर एकवर्ष पूरा ह“ुदै छ । यसपालि हामीले सबै भन्दा नमूना काम भने को जिल्लास् तरीय विपत व्यवस् थापन समितिलाई सक्रिय बनाएका
छौ ं । त्यसभित्रको पनि जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन के न्द्रलाई क्रियाशील बनाएका छांै  । त्यस् तै हामीले सूचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन एकजना कर्मचारी नै राखे र काम गरिरहे का छौ ं । पछिल्लो अवस् थामा हामीले राप्तीपारिका साविक दुईवटा गाविसका १५ वटा वडाका ४६ वटा क्लष्टरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे का छौ ं ।
मानवीय से वाभन्दा अलि बाहिर जादै छ भन्छन् त रे डक्रसलाई, हो  ?
हामीमाथि यो आरो प लागे को छ । स्वाभाविक पनि छ । हाम्रो परिवार ठूलो छ । कहींकतै त्यस् तो व्यक्तिगत रुपमा भएका पनि हो लान् । तर मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर रे डक्रसले काम गरे को छै न । सबै लाई निगरानीमा राख्ने संयन्त्र हामीस“ग छै न । किनभने यो स् वयंसे वी संस् था हो  । यथार्थ भन्ने हो भने सरकारको हिसावले रे डक्रस त एउटा एनजिओ कै रुपमा रहे को छ । किन एनजिओ को रुपमा छ भने मानवीय से वाका लागि सरकारको सहयो गी संस् थाका रुपमा पनि हामीले काम गरिरहे का छांै  । त्यसकारणले हामीले विभिन्न दे शका दाताहरुले हामीलाई सहयो ग गरिरहे का छन् । तर पनि हाम्रो है सियत भने को ने पालमा एनजिओ कै रुपमा छ । वषेर् नि नवीकरण गनेर् भएकाले हामीलाई एनजिओ कै रुपमा बुझन् थालिएको छ । यसबाट जो गिन रे डक्रस कानूनको अति आवश्यक छ । संसारभरि रे डक्रस कानुन निर्माण भएका छन् र सो ही अनुसार उनीहरु चल्छन् तर ने पालमा त्यो कानून नभएकाले हामी एनजिओ को रुपमा दे खिएका छौ ं । त्यसै ले बे ला बे लामा यस् ता आरो पहरु आउने गरे का छन् । म आफै पनि एक÷दुई पटक छानवीनको दायरामा परें  । तर हामीमा त्यस् तो कुनियत नभएको र मानवीय से वामा लागे काले समस् या भएन ।
स्वयंसे वी संस्था एनजिओ को रुपमा आउदा समस्या भएको हो कि ?
हो  । मै ले माथि पनि भने ं रे डक्रस ने पालमा एनजिओ कै रुपमा दे खिएको छ । त्यसले गर्दा पनि समस् या आएको हो  ।
एनजिओ कै रुपमा दे खिनुपनेर् बाध्यता के हो तपाइहरुलाई ?
पहिलो कुरा मानवीय से वा गर्दा पनि हामी विश्वव्यापीरुपमा संगठित छौ ं र हाम्रो फे ड्रे शन छ । यसले गर्दा हामीलाई दाताहरुको सहयो ग पनि छ । जस् तो बारपाक भूकम्पको घटनामा पनि रे डक्रसका पदाधिकारी आएर अनुगमन गरे र नौ करो ड डलर सहयो गको घो षणा गरे  । जुन अहिले खर्च भइरहे को अवस् था छ । ठूलो संस् था हो  । मानवीय सहयो गका लागि काम गरिरहे को छ मात्रै के हो भने दे शमै यसलाई वै धानिकीकरण गर भने र पै रवी गनेर् काम पनि भएको छ । तर समस् याको समाधान हुन सके को छै न । मूल कुरा मै ले भने रे डक्रस कानुन नहु“दा समस् या भएको छ । हामी मानवीय से वामा लागे कै छांै तर हाम्रो है सियतको कुरा कतै उल्ले ख गरिएको छै न ।
निष्पक्षता यहाहरुको सिद्धान्त नै हो , तर पहुच र चिने जाने कै ठाउमा से वा प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने आरो प छ नि ?
यो सही कुरा हो  । तर समस्या पनि उत्तिकै छ । विपतको भो लुम कस् तो छ ? डिजास् टरका हिसावले ३५ घर जो खिममा छन् तर त्यहा धे रै जान्छ तर चार घर अकोर् ठाउमा विपत व्यवस्थापन समिति र रे डक्रसको के ही सहयो ग पुग्ने गर्छ । यो समस् या चाहि छ । तर हामीले यसलाई सके सम्म व्यवस् थापन गरे का छौ ं । खासगरी हाम्रा उपशाखा पनि छन् । उनीहरुलाई परिचालन गरे र राहत, उद्धारका काम पनि गरे का छौ ं । सानो तिनो डिजास् टरको घटनामा पुग्न र त्यही खालको सहयो ग गर्न हामीलाई स्रो त अभाव पनि हुन्छ । के ही समस् या छन् तर जानाजान त्यस् तो हु“दै न । आगामी दिनमा पनि त्यस्तो हुदै न । त्यस् तो समस् या आए हाम्रा उपशाखाहरुलाई परिचालन गरिरहे का छौ ं ।
स्वयंसे वी उत्पादन गनेर् काम के भइरहे को छ ?
यहा“हरुलाई एउटा विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने हरे क नया आउने ले के ही न के ही नया“ काम गर्छ । हिजो म भन्दा पहिले का ने तृत्वभन्दा हामी धे रै अगाडि पुगे का छौ ं । म भन्दापछि आउने ने तृत्व मै ले गरे को भन्दा धे रै अगाडि बढ्छ । यो विज्ञानको नियम नै हो  । स्वयंसे वी निर्माणमा समस्या हो ला जस्तो मलाई लाग्दै न ।
नया पिढीलाई स् वयंसे वामा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
हामीले नियमित कार्यक्रममार्फत यो काम गरिरहे का छौ ं । जस् तो जुनियर रे डक्रस सर्कल प्रायः सबै विद्यालयहरुमा गठन भएका छन् र ती क्रियाशील पनि छन् । जुनियर सर्कल परिचालन गनेर् शिक्षक नायक र युवा सर्कल परिचालन गनेर् युवा शिक्षक नायकहरु पनि हुनुहुन्छ । झण्डै एक सयको हाराहारीमा जुनियर रे डक्रस सर्कलहरु छन् र ती सर्कलबाट पनि नया“ स् वयंसे वीहरु निर्माण भइरहे का छन् । म आफै आउदा १८ वटा सर्कल थिए अहिले क्रियाशील ५७ वटा छन । यसले त क्रियाशील छन् र नया स्वयंसे वी जागिरहे को छ भन्ने दे खाउदै न र ?
अन्त्यमा के ही छुटे को भए ?
सर्वप्रथम त रे डक्रस दिवस र यसका आयामबारे के ही कुरा राख्न दिनुभएको मा युगबो ध परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । रे डक्रस दिवसको अवसरमा सबै लाई शुभकामना र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
Previous: प्रदेश सांसदको आफ्नै पीडा,पारिश्रमिक र सुविधा कम भएको गुनासो
Next: गिठेपानी हाइड्याममा मूल कार्यसमिति